Isniin, February 22, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Matt Chandler
Qof kasta oo ka soo shaqeeyay meherado waaweyn ayaa shaki la’aan ka cawday waqtiyo aan la tirin karin in gacanta midig aysan ogeyn waxa ay gacanta bidix sameyneyso. Adduunyada maanta la jaanqaadayo khadka tooska ah ee warbaahinta caadiga ah, ifafaalahaani xitaa wuu sii muuqdaa.
Feejignaanta faahfaahinta iyo socodka joogtada ah ee isgaarsiinta ayaa muhiim u ah shirkad kasta, ha weynaato ama ha weynaato. Khalad khaldan oo ka dhasha burburka isgaarsiinta ee muhiimka ah ama cilladda ugu yar ee qoraalka ayaa yeelan karta cilado fog.
Case in dhibic: Denny ee makhaayadaha. Liisaska casho ee cusub ee la daabacay oo loo qaybiyey dayrtii hore waxay muujinayaan CTA Isku dar wadahadalka bogga Denny ee Facebook iyo Twitter, iyo websaydhyada shirkadaha. Hal dhibaato oo yar: Aqoonsiga Twitter-ka ee khaldan ayaa liis garaysan.
Sida laga soo xigtay a warbixintii ugu dambeysay ee CNET, menus loo qaybiyay ilaa 1,500 oo goobood oo Denny ah wadanka oo dhan ku qoro aqoonsi Twitter ah oo uu leeyahay nin ku nool Taiwan. Denny's ayaa lagu soo waramayaa inuu la shaqeynayo Twitter si uu u qaato aqoonsiga, oo aan shaqeyneyn muddo ka badan lix bilood.
Dhacdadani waxay tusaale u tahay baahida loo qabo wada xiriirka u dhexeeya hubka dijitaalka iyo dhaqanka ee suuqgeynta. Waa la siiyay, dadka badankood ee u fadhiya cashada waxay u badan tahay inaysan eegin Denny's Twitter inta ay miiska fadhiyaan. Laakiin noocan oo kale ah 'snafu' macno kasta oo kale ayaa laga yaabaa inuu noqdo masiibo.
Waxay umuuqatay mid aamin ah in loo maleeyo in Denny's iska diiwaan galin lahaa twitter.com/dennys, sida ay leeyihiin dennys.com. Laakiin ma aysan yeelin, oo waad ogtahay waxa ay ka yiraahdaan waxa dhaca marka aad u maleyso.
Kawaran haddii isla khaladka lagu sameeyay barta TV-ga ama xayeysiiska daabacan? Mise warqad toos ah ama emayl boosto ama joornaal? Suuqgeynta iyo Isgaarsiinta waa inay ahaadaan xiriir toos ah, xiriir joogto ah Interactive si looga hortago khaladka noocan ah ee lagu wiiqayo xitaa dadaalada suuq geynta ugu wanaagsan.
Daabacaadda menusyada cusub ayaan umuuqan inay ubaahantahay talobixinta kooxda Interactive. Laakiin hadda xitaa aaladaha ugu da'da weyn ee ganacsiga dugsiga waxay soo bandhigaan qayb ka mid ah dijitaalka, sida URL-yada. Labada qaybood ee isgaarsiinta –dhaqameed iyo dijital-waa inay ku lug yeeshaan geedi socodka qorshaynta ee mashruuc kasta si loo hubiyo waji midaysan.